Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada Tik Tok bilaa Watermark: casharka aasaasiga ah | Hal-abuurka khadka tooska ah
Xigasho: khabiirkaaga app
Calaamadaha biyaha ayaa had iyo jeer dhib u ahaa fiidiyowyo badan, gaar ahaan codsiyada sida Tik Tok. Had iyo jeer may ahayn lama huraan mararka qaarkoodna had iyo jeer maysan ahayn shay wanaagsan oo la socda fiidiyowyadaada. Sidan, iyo sababtaas awgeed, waxaan u nimid inaan xallino dhibaatadan madaxaaga ku soo noqnoqonaysa muddo dheer.
Maqaalkan, waxaan ku sharixi doonaa sida loo soo dejiyo fiidiyowyada iyada oo aan calaamadahan sidoo kale waxaan soo jeedin doonaa qaar ka mid ah qalabka ugu fiican. si aad uga saarto apps kale. Joojinta calaamadaha noocaan ah waligeed uma sahlana sidii ay ahaan jirtay ilaa hadda, waxaana rajeyneynaa in casharkaan uu wax weyn kuu tari doono.
1 Waa maxay Tik Tok
1.1.1 Muuqaalo iyo Muusig
1.1.2 viral gal
1.1.3 Tifatiraha fiidiyowga
2 Casharro: Soo deji Fiidiyowyo bilaa Watermark ah Tik Tok
3 Barnaamijyada kale si meesha looga saaro watermarks
3.3 Ka saarida Watermark Online
3.4 Ka saarista Logo Video
Waa maxay Tik Tok
Kahor intaadan bilaabin dulucda mawduuca boostada, waxaan u baahanahay inaan kuu sheegno waxa uu yahay Tik Tok, hubaal inaad horeba u ogeyd waxa aan ka hadleyno, Waa mid ka mid ah aaladaha abuurista nuxurka ugu caansan xilligan.
Ma aha oo kaliya inay ogolaato abuurista fiidiyowyada waxayna u ogolaataa in lagu wadaago shabakadaha kale ee bulshada, laakiin sidoo kale waxay leedahay saameyno kala duwan oo kala duwan oo ka dhigaya mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee la isticmaalo labadaba Spain iyo adduunka intiisa kale. .
Muuqaalo iyo Muusig
Sida kor ku xusan, Tik Tok, abuurista fiidiyowyada muusikada waa suurtagal. Isticmaalayaal badan ayaa u heellan inay abuuraan muuqaallo qosol leh, kuwo kale oo aad u laxan, waxaa jira xitaa Tik Tok isticmaalayaasha kuwaas oo ah farshaxanno sameeya muuqaallo muujinaya ama sawiraya.
Codsigan waxaad ka heli kartaa mowduucyo kala duwan, waxaa kuu dheer, marka aad gasho, isla codsigaas wuxuu kuu horseedayaa taxane mowduucyo kala duwan ah, waana inaad doorataa kuwa aadka kuu xiiseeya. Sidan, Tik Tok waxa kaliya oo ay ku tusi doontaa waxa aad rabto iyo waxa adiga kugu xiise badan.
Tilmaamaha kale ee barnaamijkan. waa in ay u ogolaato farshaxanno badan iyo sawir qaadayaal inay shaqadooda ku muujiyaan muuqaalo. Waa hab wanaagsan oo lagu matalo shaqadaada iyo isticmaalayaasha kale inay kula falgalaan oo ay ogaadaan qofka aad dhab ahaantii tahay.
Intaa waxaa dheer, hadda Tik Tok waxay ku xiran tahay codsiyada sida Instagram, markaa haddii lagugu helo codsigan, Waxay sidoo kale ku samayn doonaan kuwo kale oo badan, taas oo kordhinaysa tirada raacayaasha akoonkaaga. Shaki la'aan waa habka ugu wanaagsan ee lagu muujin karo naftaada iyo in dadku u qiimeeyaan mashaariicdaada sida aad u qalanto.
Haddii aan dhammaanteen ku heshiinno hal shay, waa in uu yahay codsi sidoo kale loo isticmaali karo in lagu abuuro waxyaabaha sida fiidiyowyada. Laakiin waxa dad badani aanay garanayn ayaa ah ikhtiyaarrada uu tafatiraha fiidiyaha Tik Tok leeyahay. Inkasta oo ay ka soo horjeedaan kumanaan saameyn ah, Waxa kale oo ay leedahay dhaqdhaqaaqyo kala-guur oo kala duwan iyo xarfo kala duwan oo lagu dabaqo fiidiyowyadaada.
Haddii aad u heellan tahay adduunka tafatirka fiidiyaha iyo montage ama aad ka badan tahay qaybta maqalka muuqaalka, ma seegi kartid qalabkan, halkaas oo aad ka shaqayn karto tifaftire ahaan oo aad sidoo kale abuuri karto montages ugu fiican.
Casharro: Soo deji Fiidiyowyo bilaa Watermark ah Tik Tok
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono isla marka aan bilowno waa fur arjiga. Haddii aadan weli soo dejin, waxaan kugula talineynaa inaad diyaariso oo aad ku rakibto qalabkaaga. Waxaad ka heli kartaa labadaba IOS iyo Android.
Waxa labaad ee aan sameyn doono mar haddii aan helno Tik Tok waa raadinta fiidiyowga aan rabno inaan soo dejinno, waxay noqon kartaa muuqaal gaar ah oo aan ka helnay sabab qaar ka mid ah ama mid ka mid ah kuwa badan oo ka muuqda algorithm-kayaga, kaliya waa inaad doorataa mid.
Marka aan si cad u cadeyno muuqaalka aan dooraneyno, kaliya waa inaan wadaagnaa oo koobi karnaa xiriirka. Astaamahani waxay ku yaalaan geeska hoose ee midig ee daabacaadda. Haddii aan riixno, codsigu wuxuu ina tusi doonaa daaqad cusub oo aan ka heli karno doorashooyin badan oo badan. Kaliya waa in aan dooranaa midka noo ogolaanaya oo aan ku soo koobeyno sabuuradda.
Marka aan horay u soo koobiyaynay cinwaanka fiidiyowga, ka dibna waxaan aadi doonaa browserkayaga iyo waxaan raadin doonaa barnaamijka SnapTikVideo. Marka aan galno, waxay noo hagaajin doontaa bog halkaas oo ay na tusin doonto bar iyo ikhtiyaarka raadinta. Bartan waxaan ku dhejin doonaa isku xirka aan hore u soo guurinay oo dooran doonaa ikhtiyaarka "MP4 without watermark". Marka aan dooranno, kaliya waxaan ku qasbanaan doonaa inaan riixno soo dejinta fiidiyowga waana taas.
Haddii aan rabno inaan ku sameyno habka kumbuyuutarka, waa in aan sidaas oo kale samayno laakiin talaabooyinkan:
Waxaan ka raadin doonaa Tik Tok browserkayaga oo aan galeyno, waxaan raadin doonaa muuqaalka aan rabno inaan soo dejino, sidoo kale wuxuu noqon karaa muuqaal gaar ah oo aan ka helnay sababo jira ama mid ka mid ah kuwa badan oo ka muuqda Algorithmamkayaga, waa ku filan tahay in la doorto mid.
Xidhiidhka waxaanu koobi doonan doonaa si la mid ah sidii aanu ku samaynay qaabka mobilada waxaanu aadi doonaa barnaamijka SnapTikVideo.
Marka aan galno, waxay noo hagaajin doontaa bog halkaas oo ay na tusin doonto bar iyo ikhtiyaarka raadinta. Bartan waxaan ku dhejin doonaa isku xirka aan hore u soo guurinay oo dooran doonaa ikhtiyaarka "MP4 without watermark". Marka aan dooranno, kaliya waxaan ku qasbanaan doonaa inaan riixno soo dejinta fiidiyowga waana taas.
Sidaad aragteen, ma aha casharro adag in la raaco, maadaama tillaabooyinka ay aad u fudud yihiin. Haddii aad la yaaban tahay waa maxay SnapTikVideo, Waa mid ka mid ah barnaamijyada badan ee jira, halkaas oo aan awood u si ay u awoodaan si ay u soo dejisan muuqaalada codsigan iyada oo aan loo baahnayn kharash.
Marka xigta, waxaan ku tusi doonaa barnaamijyo kale oo aad ka soo dejisan karto muuqaallo aan lahayn watermarks taasina waxay sidoo kale noqon doontaa mid faa'iido leh. Mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadani waa aalado aad raadin karto adigoon soo dejineynin oo rakibin. Intaa waxaa dheer, qaar badan oo iyaga ka mid ah waa bilaash ama waxay leeyihiin xadka ugu badan si ay u awoodaan inay soo dejiyaan. Weli aad bay faa'iido u leeyihiin.
Oo mar haddaanaan doonayn inaan ku sii sugno, waanu tagnaa.
Barnaamijyada kale si meesha looga saaro watermarks
Filmora waa mid ka mid ah tafatirayaasha fiidyaha ee ugu fiican halkaas. Waxaad ka kooban tahay saameyno kala duwan oo xiiso u yeelan kara fiidiyowyadaada. Intaa waxa dheer, waxa kale oo aad haysataa ikhtiyaarka ah in aad awoodo in aad ka saarto qaar ka mid ah watermarks mahad barnaamijkeeda.
Interface-keeda iyo nashqada ku dhex jirta waa mid cajiib ah. Aad bay u fududahay in la isticmaalo oo la dhex maro oo sidoo kale waxay leedahay nooc bilaash ah oo aan ku shaqeyn karno si aan u dhaafno. Shaki la'aan waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu bilaabi karo tafatirka iyo isku xirka fiidiyowyadaada oo lagu dhejiyo shabakadaha bulshada.
Waa mid kale oo ka mid ah tafatirayaasha fiidiyaha ugu muhiimsan ee jira. Sidoo kale waa gebi ahaanba bilaash ah waxayna kuu ogolaaneysaa inaad sameyso fiidiyowyo oo aad wax ka beddesho si xirfad leh oo aan qiimo lahayn. IYOWaa doorashada ugu fiican in la bilaabo naqshadaynta. Intaa waxaa dheer, haddii aad naftaada u hurto naqshadaynta garaafyada oo aad sidoo kale u hurto naftaada aqoonsiga shirkadda, Waxa kale oo aad haysataa suurtogalnimada in aad si fudud meesha uga saarto calaamadaha-biyoodka ee sumadaha iyo sumadaha qaarkood.
Shaki la'aan waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo tafatirka fiidiyowyada oo aad noqoto xirfadle ku yaal adduunka maqal-muuqaalka, kaliya waa inaad isku daydaa.
Ka saarida Watermark Online
Waa mid ka mid ah barnaamijyada heerka sare ee kuu ogolaanaya inaad ka saarto watermarks. Thanks to barnaamijyadan, ka saarida watermarks ma aha hawl adag. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay nooc yar oo bilaash ah kaas oo aad heli doonto wax badan si aad si raaxo leh ugu shaqeyso mashaariicdaada, adigoon naftaada xaddidin.
Noocan bilaashka aha wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka saarto wadarta 5 watermark bishii, taas oo ah, 5 fiidiyow bishii. Haddii waxa aan rabno ay tahay inaan ku shaqeyno in ka badan shan fiidiyow, markaa waa inaan bixinaa kharash, laakiin maaha mid aad u ballaaran.
Ka saarista Logo Video
Qalabkan fudud waxaad ka saari kartaa calaamadaha biyaha labadaba sawirada iyo fiidiyowyada. Wax hawsha ka dhigaya mid aad uga fudud qalabkii hore ee u heellanaa oo keliya ka saarista calaamadaha biyaha ee fiidiyowyada.
Waa mid aad u fudud in la isticmaalo qalab iyo sidoo kale dareen leh. Naftaadu la yaab oo bilow inaad tijaabiso qaar ka mid ah agabka aanu soo jeedinay, Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale samayn kartaa baaritaan aad u ballaaran oo aad naftaada la yaabto noocyada kala duwan ee qalabka jira.
Shaki la'aan, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa lagu gartaa maarayntooda fudud.
Soo dejinta muuqaalada iyo ka saarista calaamadaha biyaha waa hawl soo baxday inay tahay mid aad u fudud haddii aan ka hadalno barnaamijyada badan ee jira oo diyaar u ah. Shaki la'aan, qaar badan oo iyaga ka mid ah, sida kor ku xusan, waa kuwo aad u fudud in la isticmaalo, gaar ahaan haddii aad tahay qof ku cusub ama ku cusub oo aadan u hurin naftaada inaad wax ka beddesho muuqaalka.
Waxaan rajaynaynaa in casharka uu wax weyn ku taray oo aanu xalinay mushkiladaas madaxaaga ku jirtay. Hadda waxa la gaadhay wakhtigii aad aqoontaada daaha ka qaadi lahayd oo aad ku dhiiran lahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada Tik Tok bilaa Watermark
Immisa ayuu qaataa naqshadeeyaha garaafiga ee Spain